ရုံးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်များနှင့် ခွဲရုံများတွင် အသုံးပြုလျှက်ရှိသော
Call center/ Complain တယ်လီဖုန်းစာရင်း
စဉ် ရာထူး/ဌာန Complain
ကလေးခရိုင်ရုံး ၀၇၃ .၂၁၅၇၁
ကလေးမြို့ရုံး ၀၇၃ .၂၁၅၀၁
တိုင်း/ယာရုံး Call Center ၂၀၂၃၀၁၃/၂၀၂၅၀၀၉
‌ရေနံချောင်းမြို့ရုံး ၀၆၀. ၂၁၅၀၁/၈၈၂၂၆၆၆
‌ချောက်မြို့ရုံး ၀၆၁. ၂၀၀၅၀၁/၄၀၁၆၂၉၄၅၀
‌တောင်တွင်းကြီးမြို့ရုံး ၀၆၃. ၅၀၀၂၀
မြို့သစ်မြို့ရုံး ၀၆၃. ၅၃၁၂၃
နတ်မောက်မြို့ရုံး ၀၆၃. ၆၉၅၀၁
မင်းဘူးခရိုင်ရုံး ၀၆၅. ၂၁၅၀၁
မင်းဘူးမြို့ရုံး ၀၆၅. ၂၁၆၆၆
စကုမြို့ရုံး ၀၆၅. ၄၀၂၆၂
ပွင့်ဖြူမြို့ရုံး ၀၆၃. ၆၀၃၀၁
စလင်းမြို့ရုံး ၀၆၃. ၄၂၂၅၇
ပခုက္ကူခရိုင်ရုံး ၀၆၂. ၂၂၅၀၁
ပခုက္ကူမြို့ရုံး ၀၆၂. ၂၁၅၀၁/၂၃၆၆၆
ကမ္မမြစ်ခြေ ၀၆၂. ၆၀၃၄၀
မြစ်ခြေရုံးခွဲ ၀၆၂. ၆၅၅၀၁
‌ပေါက်မြို့ရုံး ၀၆၂. ၄၅၃၀၁
မြိုင်မြို့ရုံး ၀၆၂. ၄၀၃၀၁
ရေစကြိုမြို့ရုံး ၀၆၂. ၃၀၃၀၁
ဆိတ်ဖြူမြို့ရုံး ၀၆၁. ၃၀၅၀၁
‌အောင်လံမြို့ရုံး ၀၆၉. ၂၀၀၆၆၆/၂၀၀၅၀၁
ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့ရုံး ၀၆၉. ၄၀၀၅၂
ဂန့်ဂေါမြို့ရုံး ၀၆၂. ၅၀၃၀၁
ဒု - တိုင်း/ယာ ၂၈၅၆၀
ပြည်/ ခရိုင်ရုံး ၂၆၆၆၆
သုံးဆယ်မြို့ရုံး ၀၅၅ ၂၂၃၀၀၈၈
သာယာဝတီမြို့ရုံး ၀၅၅ ၂၂၃၀၀၃၅
လက်ပံတန်းမြို့ရုံး ၀၅၃ ၃၂၀၃၈
မြတ်တိုခွဲရုံ ၆၆ / ၁၁ ကေဗွီ ခွဲရုံ ၂၉၀၂၂/၂၉၀၂၃
ကျုံပျော်မြို့ရုံး ၀၄၆ -၅၆၄၃၇
ဘိုကလေး (၃၃/၁၁)ခွဲရုံ ၄၅၆၉၂
တိုင်း/ယာ (အင်/ယာ ) ၂၀၂၃၄၉၅
မြစ်ကြီးနားမြို့ /ယာ ၂၅၂၂၆၅၃
လွယ်ဂျယ်မြို့ / မှူးရုံး ၀၉-၄၇၀၁၈၈၄၄
ပြည်/ယာရုံး (အင်/ယာ) ၂၂၂၁၁၅၃(fax)
ပြည်/ယာရုံး (အင်/ယာ) ၂၂၂၂၉၅၈
ပြည်/ယာရုံး (ဘဏ္ဍာ) ၂၂၂၂၉၃၈
၆၆ ကေဗွီ ရှားတောခွဲရုံ ၀၁-၃၃၃၁၀၄၃/ ၄၄/၄၅/၄၆-၅၀၄၆
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့/ မှူးရုံး ၆၀၁၆၅
‌ကော့ကရိတ်မြို့/ ယာရုံး ၄၀၀၂၉
တွန်းဇန်မြို့/ယာရုံး ၀၉ ၄၅၇၄၉၁၄၄၇
ကျီခါးမြို့/ယာရုံး ၀၉ ၄၂၇၁၇၅၀၇၉
ရိမြို့/ယာရုံး ၀၉ ၄၅၇၄၉၁၄၆၅
မတူပီမြို့/ယာရုံး ၀၉ ၄၅၇၄၅၉၁၄၆၈
ကန်ပက်လက်မြို့/ယာရုံး ၀၉ ၄၂၆၆၀၀၁၄၅
​ရေဇွာမြို့/ယာရုံး ၀၉ ၄၅၇၄၉၁၄၆၄
ဆမီးမြို့/ယာရုံး ၀၉ ၄၅၇၄၉၁၄၇၉
ပလက်ဝမြို့/ယာရုံး ၀၉ ၄၅၇၄၉၁၄၇၈
ခိုင်ကမ်းမြို့/ယာရုံး ၀၉ ၄၅၇၄၉၁၄၅၃
​ဖလမ်း ၆၆ ကေဗွီခွဲရုံ ၉၄၂၈၈၆၂၆၄၀
မင်းတပ် ၆၆ ကေဗွီခွဲရုံ ၄၂၈၈၆၂၆၄၁
စစ်တွေမြို့ရုံး ၂၂၈၆၆/ ၂၁၁၈၁
ကျိုင်းတုံခွဲရုံ ၂၁၅၄၁/ ၂၂၆၆၆
‌တောင်ကြီးခရိုင် /ယာရုံး ၂၀၅၈၄၉
ပင်းတယမြို့/ယာရုံး ၆၆၀၁၄ (ၤFax)
​ ​နောင်ယာစိုင်းခွဲရုံ ၉၆၁၇၅၇၈၈၈
သီပေါ ၆၆ခွဲရုံ ၈၀၁၉၆/၈၀၆၀၁